KartRider Rush + bịarutere na Android ka ya na Mario Kart nwee Gam akporosis
Xlọ ọrụ NEXON taa malitere KartRider Rush +, Egwuregwu ọduọ kart ọhụrụ na-abịa ịsọ mpi na Mario Kart Tour. Karịsịa, ọ ga-eme ya site na ịntanetị ọtụtụ na oge iji chee ndị egwuregwu ndị ọzọ ihu.
Njirimara a bụ ihe kachasị ọhụrụ anyị kwuru n’elu nke Nintendo na nke ulo oru taa na-elekwasị anya. Egwuregwu na-erite uru Ọzọkwa nnukwu talent na visual larịị na nke ikekwe ọ na-efu ihe iji mee ka ọfụfụ ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere egwuregwu Mario. Gaa maka ya.
1 High visual na oru larịị
2 Ọtụtụ skids na-echere gị na KartRider Rush +
3 Nnukwu egwuregwu na ọkwa niile
High visual na oru larịị
KartRider Rush + na-abịarute na ọchịchọ niile bụrụ onye na-ama aka na egwuregwu Nintendo. Ọ bụghị obere ihe, mana eziokwu bụ na ọ na-aga nke ọma, ebe o nwere ihe niile iji bụrụ otu n'ime egwuregwu ịgba ọsọ kachasị mma taa; Ọbụna ma ọ bụrụ na m mee ya site na kart ma anyị nwere ndị ọzọ flashy dị ka Forza Street.
Bụrụ na ọ nwere ike, anyị nwere egwuregwu kart ọzọ dị egwu nke anyị nwere ọtụtụ ọdịnaya iji chọpụta, ọnọdụ akụkọ na ndị ahụ ọtụtụ onye na-eche ndị egwuregwu ndị ọzọ ihu na ozugbo. Anyị na-eche ihu nke abụọ nke saga nke yiri ka ọ kpebisiri ike ịga nke ọma na ekwentị mkpanaaka, yabụ anyị nwere ihe niile n'aka anyị iji nwee anụrị.
N'ime ụdị ndị a niile anyị nwere Ọsọ Ọsọ, na nke anyị ga-enwetara ikikere iji nwee ọganiihu na sekit ọhụrụ; Ọnọdụ Arcade, nke anyị nwere ike ịhọrọ usoro egwuregwu dị iche iche dị ka Ọsọ Item, Infini-Boost ma ọ bụ Lucci Runner; Ọnọdụ ọnọdụ, na nke anyị nwere ndị isi iji gbagoo ha; Akụkọ Akụkọ, ebe anyị ga-anwa ịkwụsị onye na-apụnara mmadụ nri Captain Ludomani; na Oge Ọnwụ, ebe ị ga-akụ aka elekere iji merie.
Ọtụtụ skids na-echere gị na KartRider Rush +
Egwuregwu ahụ dị mfe na mbụ. Anyị nwere ọsọ ọsọ na anyị ga-elekwasị anya na iduzi anyị kart, pịa turbo ma mee ngwa ngwa kpatụ ihuenyo ahụ iji nweta nitro ụma. N'ezie, nkuzi ahụ na-akụziri anyị otu esi aga ije nke ọma iji were akụkụ ahụ ọsọ ọsọ. Yabụ ịnwere ike ịnwe nkuzi a wee pụta nke ọma n'ọsọ.
Yabụ anyị nwere ihe niile n'aka anyị na-uru nke ezigbo oge agbụrụ megide ndị egwuregwu ndị ọzọ. Oge kwesịrị ekwesị maka turbos na skids ndị ahụ dị oke mkpa ịmịcha sekọnd ole na ole mgbe ha laghachiri sekit ahụ.
Na KartRider Rush + anyị nwere ihe karịrị sekit 45, yabụ na ị ga-egwu ọtụtụ iji mụta aghụghọ ya ọ bụla wee si otú a bụrụ nke kacha mma n'ụwa. Egwuregwu nke na-eji ọtụtụ omume ọma akpọrọ ihe na anyị nwere ike ịnọ na ihu nnabata na ndị ọzọ karịa oge dị egwu nke a na-eme nnukwu ahụmịhe egwuregwu.
Nnukwu egwuregwu na ọkwa niile
Mgbe anyị na-egwu KartRider Rush + anyị ga-atụnyere ya na Nintendo. Ee ọ bụ eziokwu na ikekwe sekit nwere na obi «Nintendo», ma ọ bụrụ na anyị ejiri ha tụnyere ha, ha abụọ nwere ezigbo omume iji kpaa anyị ọnụ. Ee ọ bụ eziokwu na n'ime nke a anyị enweghị mmetụta na anyị na-egwu ndị ọzọ ọsọ ọsọ. Anyị nọ naanị n'ọnọdụ mbụ ma ọ gwụla ma anyị mere ihe ọjọọ, ha na-amalite ịgafe anyị.
Ihe osise ọ bụ egwuregwu nwere ọtụtụ agwa ọma na nke ahụ dọtakwara uche maka ọdịdị nke ụda ahụ. Na Galaxy Note10 + na ndị ọkà okwu ọ na-atụ ụjọ. Ọ na-eme maka ahụmịhe dị ukwuu na njikwa dị mma. Anyị ahụbeghị nwayọ ọ bụla, yabụ ihe niile kachasị mma inye anyị oge ụfọdụ. Ọ bụrụ n ’ọ bụ n’ebe ndị ọrụ ibe gị nọ, karịa karịa, yabụ egbula oge ịnwale ya na ime ka ndị ọzọ mara.
KartRider Rush + na-abịa gam akporo na arụ ọrụ ụlọ nke ọma na-enwe mmetụta na ọ ga-abụ egwuregwu arụnyere ọtụtụ nde mmadụ. Ugbu a ị nwere ike ịga na-egwu egwuregwu oge ha, nwalee freemium gị na ọganihu na naanị nkwarụ: ọ bụ n'asụsụ Bekee.
Emechara nke ọma na ọkwa niile na ọ nweghị ihe ọ bụla belụsọ Bekee, ebe ọ bụ na ọ erubeghị n'asụsụ Spanish.
Ihe odide ya dị ezigbo mma
Ọtụtụ sekit na sekit
Da dị mma
Ọ bụghị na Spanish ma
Developer: Xlọ ọrụ NEXON
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ugbu a KartRider Rush + dị na gam akporo, nke nwere ike ịbụ nsogbu nke Mario Kart Tour